White Chocolate Ganache + ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - Frosting နှင့်အေးခဲခြင်း
အဖြူရောင်ချောကလက် Ganache စာရွက်
အဖြူရောင်ချောကလက် ganache သည် vanilla အရသာအတွက် buttercream အစားကိတ်မုန့်များပေါ်တွင်ပြည့်စုံစွာသောက်ခြင်း၊ glaze အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း (သို့) သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲစေရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအပူ / စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်လုံလောက်သည်။ သငျသညျအဖြူရောင်ချောကလက် ganache ချွေးမသိရသလား သူတို့အားစူပါစိုထိုင်းသောနေ့ရက်ကာလ၌ဒါအရေးကြီးတယ်။
ကိတ်မုန့်ရောနှော box မှစတော်ဘယ်ရီထည့်သွင်းခြင်း
အဖြူရောင်ချောကလက် Ganache Frosting
ငါအဖြူရောင်ချောကလက် ganache ကိုဘယ်လိုလုပ်အပြည့်အဝနားလည်ရန်နှင့်ပင်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့တောင်မှအချိန်ကြာမြင့်စွာယူကြောင်းဝန်ခံ။ တခြားသူတွေအတွက်တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ganache လုပ်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်နည်းနည်းနဲ့ပျောက်နေတာငါအမြဲခံစားရတယ် ၎င်းသည်နူးညံ့လွန်းခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ။
ထွက်လာတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ganache လုပ်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ကအချိန်ကောင်းပါပဲ။ အချိန်ကောင်းသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ Ganache ကိုချောကလက်နဲ့လုပ်ထားတာ၊ ချောကလက်ကအပူချိန်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ အရမ်းပူနွေးပြီးယိုယွင်းနေတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုပါ။ အရမ်းအေးပြီးခဲယဉ်းတယ်။ အချိန်တန်တဲ့အခါ ganache ကိုသုံးရမယ်။
သင်ပထမဆုံး ganache လုပ်သည့်အခါကအလွန်ပျော့ပျောင်းသောအရည်။ ဤသည်ကသင်၏ယိုကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်သောက်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သင်၏အအေးကိတ်မုန့်ကိုဖျော်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် ကြံ့ကိတ် ။
သင်အဖြူရောင်ချောကလက် ganache ကိုအနည်းငယ်ထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါ, ကိုကိုးထောပတ်ခိုင်မာစတင်သည်နှင့်ကိုက်ညီမှုမြေပဲထောပတ်နဲ့တူစတင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန် Caked By Cynthia မှသူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်း Cynthia မှအကြံဥာဏ်ရခဲ့သည်။ သူမသည်အပူရှိန် / စိုစွတ်သောမိုင်ယာမီရှိ Fl ၌ ganache နှင့်သီးသန့်အလုပ်လုပ်သည်။ သူကကျွန်တော့် ganache ကိုရေတိမ်ပိုင်းပန်းကန်ထဲထည့်ဖို့ပြောတယ်။ စုစုပေါင်းဂိမ်း changer ။
Ganache ဟာအခန်းထဲမှာဘယ်လောက်အေးလဲဆိုတာကိုမိနစ် ၂၀ ခန့်မှတစ်နာရီခန့်တွင်သတ်မှတ်ပြီးယခုသင်၏ ganache သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအေးခဲစေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
သင့်ရဲ့ ganache လွန်းခိုင်မာလွန်းလျှင်, 10 စက္ကန့်မိုက်ခရိုဝေ့နှင့်ပျော့ပျောင်းသည်အထိနှိုးဆော်။ အလွန်အကျွံအပူမပေးဖို့သတိထားပါ (သို့) သင်သည်သင်၏ ganache ကိုခွဲနိုင်ပြီး၎င်းသည်တစ်ဖန်ပြန်လည်အေးစက်ရန်စောင့်နေရပါလိမ့်မည်။
Perfect White ချောကလက် Ganache ပြုလုပ်နည်း
အဖြူရောင်ချောကလက် ganache ပြုလုပ်ခြင်းစူပါရိုးရှင်းပါသည်။ ငါချောကလက်ကိုချိန်ခွင် (ချိန်ခွင်သုံးခြင်းကခွက်ကိုသုံးခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်) ကိုချိန်။ အပူခံအိုးထဲသို့ထည့်သည်။ ငါချောကလက်ပျော့ပျောင်းစတင် 1 မိနစ်မိုက်ခရိုဝေ့။
ထိုအခါငါမုန့်ကိုတစ် ဦး မျှတည်ထားပါမှဆောင်ခဲ့။ ချောကလက်ထိပ်ကိုငါသွန်းလောင်း။
မင်းရဲ့ချောကလက်ကိုမုန့်နဲ့ဖုံးထားတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပေါင်းစပ်သည်အထိ whisk ထို့နောက်အရောအနှော 5-10 မိနစ်ခန့်ထားပါစေ။
ကျွန်တော့် ganache ကိုကိတ်မုန့်တစ်ခုထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်။ ငါ့အတွက်တစ်နာရီလောက်ကြာတယ်။
သင့်ရဲ့ ganache ကိုစပါးစေ့များဖြစ်စေနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုမဖွံ့ဖြိုးအောင်ပလတ်စတစ်ခြုံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါ (ဒါကြောင့် ganache ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိပါတယ်) ။
အဖြူရောင်ချောကလက် Ganache ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားနိုင်မလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြူရောင်ချောကလက် ganache ကိုအခန်းအပူချိန်တွင် ၂ ရက်ခန့်ထားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းနောက်အအေးခံရန်လိုအပ်သည်။ သေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများသည်ကြီးထွားရန်ရေလိုအပ်ပြီး ganache သည်အများအားဖြင့်သကြားနှင့်အဆီဖြစ်သည်၊ သင်ကမသုံးသည့်အခါ၎င်းကိုအအေးခံထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှခွဲခြားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ganache ကိုအမြဲတမ်းပလတ်စတစ်ခြုံ။ မျက်နှာပြင်ကိုထိပြီးသိုလှောင်ပြီးရုပ်ရှင်မဖြစ်ပေါ်အောင်ကာကွယ်သည်။ ထို့နောက်ငါအသုံးမပြုမီမုန့်သည်အထိပျော့ပြောင်းပြီးနှိုးဆော်ရန်မိုက်ကရိုဝေ့တွင်အပူပေးပါ။
အဘယ်အရာကိုချောကလက် Ganache Glaze ပြီးတော့ယိုစာရွက်
သင်၏ကိတ်မုန့်ကို ganache ဖြင့်ကပ်ရန်သင်၏ ganache သည် 90 to သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်စောင့်ရန်အရေးကြီးသည်။ အေးခဲ။ အရသာရှိသောသုတ်လိမ်းရန်သင်၏အေးခဲ။ အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်များ၏ထိပ်တွင် ganache ကိုသွန်းလောင်းနိုင်သည်။
ငါသည်ငါ့ကိတ်မုန့်အပေါ်စုံလင်သောယိုအောင်တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုပါ! သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနိုင်သည် ရေ ganache ချောကလက်နှင့်အရည်အမြင့်ဆုံးအချိုးအစားရှိသော်လည်းစတိုးဆိုင်ရှိမုန့်ကို ၀ ယ်ရန်မေ့သွားသောအခါတွင်အပြစ်ရှိသည်။
အဖြူရောင်ချောကလက် Ganache အချိုး
လူတွေက 3: 1 or 4: 1 လိုအချိုးအကြောင်းပြောနေတာကိုသင်ကြားရလေ့ရှိတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာစာရွက်တွင်ချောကလက်နှင့်မုန့်ပမာဏတို့ဖြစ်သည်။ အချိုးအစားအနေဖြင့်ဖော်ပြခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာချောကလက်မည်မျှပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်မည်သည့်မုန့်ထည့်ရမည်ကိုသတ်မှတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းစာရွက်ကိုချနိုင်သည်။
အများအားဖြင့်ငါအဖြူရောင်ချောကလက် ganache ကို 3: 1 အချိုးနဲ့သွားလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒါက creamy၊ ဥပမာအဖြူရောင်ချောကလက် ၃ ပေါင်နှင့်မုန့် ၁ ပေါင်။ ငါအရမ်းပူတဲ့နေရာမှာမနေဘူး။ ဒါကြောင့်တကယ်ပူပြင်းတဲ့ / စိုထိုင်းဆinရိယာထဲမှာရှိနေရင် 4: 1 အချိုးနဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စာရွက်ထဲမှာချောကလက်ပိုများလာတယ်။
သင်အသုံးပြုသောချောကလက်အမျိုးအစားသည်သင်၏ချောကလက်အစုံမည်မျှခိုင်မာသည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အစစ်အမှန်ချောကလက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။ သကြားလုံးအရည်ပျော်တာကိုအသုံးပြုခြင်းကချောချောမွေ့မွေ့ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချိုးအစားကိုတွေ့ရှိပါကတသမတ်တည်းသောရလဒ်များအတွက်တူညီသောချောကလက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကပ်ပါ။
အဖြူရောင်ချောကလက် Ganache ကိုဘယ်လိုအရောင်တင်ရမလဲ
အဖြူရောင်ချောကလက် ganache နှင့်ပတ်သက်။ အကြီးအရာအရာသည် ganache ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ emulsion ဖွဲ့စည်းရန်သင်သည်ပြီးသားသင်၏ချောကလက်ထဲမှာအရည်ထည့်သွင်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာအရောင်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ချောချောမွေ့မွေ့“ သိမ်းယူခြင်း” ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုသင်၏ ganache တွင်ထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်ကြွယ်ဝသောနှင့်တောက်ပသောအရောင်များကိုလိုချင်လျှင်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ artisan အသံထွက် chameleon အရောင်များ အရာချောကလက်အရောင်အဘို့ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ buttercream အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။
သငျသညျ buttercream ကိုချစ်ပေမယ့် ganache ၏တည်ငြိမ်မှုချင်ပါသလား ကမ္ဘာကနေအကောင်းဆုံးနှစ်ခုကိုရယူပါ အဖြူရောင်ချောကလက် buttercream စာရွက် ! ချောကလက်ဖြူသည် vanilla အရသာကိုထပ်ဖြည့်ပေးသော်လည်း buttercream သည်ရိုးရာထက်အနည်းငယ်ပိုမိုနူးညံ့စေသည် လွယ်ကူသော buttercream ။
ပြီးပြည့်စုံသောချောကလက် Ganache ပြုလုပ်နည်း
သငျသညျအခြို့သောမှောင်မိုက်စေလိုလျှင် ချောကလက် ganache ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဘို့ကြီးစွာသောစာရွက်ရှိသည်! ကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်များကိုဖြည့်တင်းရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားသည့်နှင့်ထုထည်ထားသောကိတ်မုန့်များအတွက်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုကိုထည့်သွင်းရန်ချောကလက် ganache ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
White ကချောကလက် Ganache သင်ခန်းစာ
အဖြူရောင်ချောကလက် ganache လုပ်ဖို့ဘယ်လိုငါ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ!
ချောချောမွေ့မွေ့ glaze (သို့) အရသာချောမွေ့စေရန်အတွက်အသုံးပြုသောချောကလက် ganache ကိုအလျင်အမြန်လွယ်ကူအောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:ဆယ့်ငါး မိနစ် ကယ်လိုရီ2224kcal
▢၂၄ oz (680 ဆ) အဖြူရောင်ချောကလက်
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) ပြင်းထန်သောနှင်တံ Cream
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) မီးဖိုထဲတွင် ၁ မိနစ်ခန့်ပျော့ပျောင်းစေရန်ချောကလက်
မုန့်နှင့်ချောကလက်တို့ကိုပေါင်းစပ်ရန်ညင်ညင်သာသာ whisk, လေထဲမထည့်ပါနဲ့
ယိုများအတွက်အသစ်စက်စက် ganache ကိုသုံးပါ (သင်၏ကိတ်မုန့်အလွန်အေးကြောင်းသေချာအောင် ganache လျှင်မြန်စွာသတ်မှတ်)
တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်ရေတိမ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပန်းကန်ထဲသို့လောင်းပါ။ ထို့နောက်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုမခဲမီခရင်မ်မွှေသည်အထိနှိုးဆော်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ ganache သည်အလွန်ခိုင်မာပါကမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်သည် ၁၀ စက္ကန့်တွင်ပျော့ပြောင်းပြီး ganache သည်အလိုအလျောက်ကိုက်ညီမှုရှိသည့်အထိနှိုးဆော်နိုင်သည်။
အနီရောင်ကတ္တီပါ box ကိုကိတ်မုန့်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လို
ချဉ်သောမုန့်မပါဘဲ lofthouse cookie ကိုစာရွက်